အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: April 2012
ရှုံးသူ ၏ အနိုင်၊ နိုင်သူ၏ အရှုံး
“အလျှော့ပေး လိုက်တာလားလို့ မေးရင် ဟုတ်ပါတယ်။ အလျှော့ပေးလိုက်တာပါ။ ပြည်သူ့ဆန္ဒအတွက်ပါ" ( ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် )
ပျော့ပြောင်းတဲ့ ရေသား ကတိုက်စား..
နုနယ်တဲ့ သစ်မြစ်တွေ ကဖောက်ခွဲ
အေးမြသော ရေစက်ပေါက်တွေဖြန့် ကြဲ
မေတ္တာနည်းနဲ့ဒေါသ မီး..
ခွင့်လွှတ် အလျှော့ပေးခြင်းသာ မြင့်မြတ်
ဒူးထောက် လက်မြှောက်ခြင်း မမည်
ကြောက်ရွံ့ ၍ အောက်ကျို့ ခြင်းမမည်
ထိုးမဲ့ဆင် ဟူသည် မထိုးမီ နောက်တစ်လှမ်းဆုတ်စမြဲ။
ဖြည့်ဆည်း အနစ်နာသည် ပဓာန
သံဃာ့ အားပင် ဘုရားမလွန်ဆန်သာ
ညစ်ပတ်လိုသူ အနိုင်ဆုကို ပိုက်
ပြည်သူ့ အမုန်း ကဋေကဋာလည်ပင်းခိုက်
အနိုင်ဆိုတာ တကယ်တော့ အရှုံးဖြစ်တယ်။
ဝေသန္တရာဇာတ်တော်ထဲ စူစကာပုဏ္ဍား က ဝေသန္တရာမင်းကြီး သားတော် သမီးတော်တွေ ကို ကြိုးတုတ်ပြီးရိုက် ။ မယ်မဒ္ဒီ က ပူဆွေး ငိုကြွေး ။ ကျမ ဖြင့် အမလေး…..မုန်းလိုက်ပါဘိ ဒီပုဏ္ဍား။
ပွဲကြည့်သူများအတွက် ပုဏ္ဍားက ရက်စက်လေလေ.. မင်းသမီး အမှတ်ပိုရလေလေပါဘဲ။
ပြည့်သူ့ မေတ္တာမရတဲ့ ပုဏ္ဍား..စားပိုးနင့်သေသေ..သြဘာ လက်ခုပ်တွေ ညံ့လေလေဘဲ။.
ဟောကြည့်။ ဒီပွဲ မှာ ဘယ်သူနိုင်ပါသလဲ။ ပွဲကြည့်သူများသာ ဆုံးဖြတ်မဲ့အဖြေ။
ပုဏ္ဍား ခမြာ နိုင်ပါသော်ညား ဂုဏ်သိက္ခာသေ။ အရှုံးကိုသာ နောက်ဆုံးရတယ်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:25 PM0comments
ဘဘဦးခင်ညွှန့် သို့ 
Photo: Narinjara.com မှ
သင် ဘယ်အစားမှာ ပါပါလိမ့်။
၁။ ကုသိုလ်မဲ့ရှင်း ဘာဝနာကင်းသူ
အတ္တပူထူ ဤသို့ သူသည်
ပေတ မနုသ လူပြိတ္တာ။
၂။ သီလမသိ တဏှာညှိသည်
မှောင်ပိတ်မောဟ တိရစ္ဆာန်မျှသို့့
ဤမျှသိသော လူသည် တိရစ္ဆာန မနူသ
တိရစ္ဆာန် အလားသို့ လူ
၃။ လူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ညား ကုသိုလ်မဲ့၏။
ဂရုဏာနည်းဘိ ဒေါသ၏ အလို
နိရယ မနုသ လူငရဲသား။
၄။ အကြင်သူသည် သိရှိပေ၏
အကုသိုလ် နှင့် ကုသိုလ်
အမှန်နှင့် အမှား၏ ခြားနားပုံ
ကံ၏ အကြောင်း နှင့် အကျိုးတရား
အိုနာသေခြင်း၏ အစိုးမရခြင်း အမှန်
ပိုင်းခြားသိမြင် ဥာဏ ၀ိဇ္ဇာယှဉ်၏
ပေတမနုသ၊ တိရစ္ဆာန မနုသ၊ နိရယ မနုသ
၃ ပါးသော သင်လူသားသည်
လူ့ အဆင့်မမီ လူဖြစ်ရှုံးကြသူများဖြစ်သည်။
ရိုသေရပါသော ဘဘ ဦးခင်ညွှန့် 
ဘဘ၏ မိခင်ပေးသော အသက်ခန္ဓာ
သင့်၏ အာဇီဝ လမ်းပေါ်
အမှတ်ထင်ထင်.. အမှတ် မထင်
ကြေကွဲပူဆွေး ကျန်ရစ်သော မိသားစုတို့ ၏ မျက်ရည်
လူမမယ်ကလေးငယ်များ၏ အဖေမဲ့ အမေမဲ့
သင် မတော်တဆ လုပ်ခဲ့ပါလည်း..
ကံ ကံ၏ အကျိ်ုး..
သင် မြင်တတ်အောင် ရှုပါလော့
ကုသိုလ်နှင့် အကုသိုလ် ကား
ပင်လယ်ပြင်သွားသော ဖောင်နှင့် ၀န်ထုတ်အလား..
၀န်လေး၍ ဖောင်သေးလျှင် သင်မြုပ်မည်။
ဖောင်ကြီး၍ ၀န်သေးလျှင် သင်ပန်းတိုင်ရောက်မည်။
အကုသိုလ် ၀န်လေးသော သင့်ဘ၀
ဖောင်ကို ကြီးပါအောင် သင်တည်ဆောက်မှ
အပါယ်သို့ မကျစေမည့် အရေး..
အကောင်းဆုံးသော လက်ဆောင်ဖြစ်သော ဓမ္မ
သင့် ဘ၀ ကုသိုလ်ဖြင့် ပြန်စစေချင်သည်။
မသဒ္ဓါ ( ၄။၁၄။၂၀၁၂)
ကျမ ရိုးသားစွာဆိုပါရစေ။ ဘဘအနေဖြင့် လူဘ၀တစ်လျှောက်တွင် ကျော်ဇောထင်ရှားမှု သြဇာ ကိတ္တိမ လည်းရသင့်သလောက် ရခဲ့ပြီးပါပြီ။
ကျွတ်တန်းဝင်ဖို့အချိန်သင့်ပါပြီ။
ဘဘ အနေဖြင့် အသိတရားရ၍ အပြစ်များအတွက် ဖြေဖျောက်ရာ တရားဓမ္မရိပ် တွင် ပျော်ရွှင်စွာ တစ်သက်တာ ရဟန်းဝတ်လိုပါက ကျမ ၏ သမ္မာအာဇီဝ ချွေးဖြင့် ရင်းနှီးရသော ငွေကြေးဖြင့် ရာသက်ပန် ရဟန်းအမအဖြစ်ထောက်ပန့် ရန် ကျမဆန္ဒရှိပါသည်။ မသေမီ ကျန်သော နှစ် အပိုင်းအခြားများအတွက် မည်သည့် လောကီစည်းစိမ်က မှ သင့်အား ကောင်းသော အိပ်စက်ခြင်းအတွက်တတ်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ် ပါ။ အေးမြသော တရားဓမ္မက သာ သင့်အတွက် ခိုနားရာဖြစ်ပါသည်။ သင်သေသော်လည်း. သင့် ဇနီး သင့်သားသမီး သင့်မြေး သင့်ခြံ သင့်နာမည် သင့်ပိုင်ဆိုင်မှု စည်းစိမ်သည် လိုက်ပါမည်မဟုတ်။ ယုတ်စွ အဆုံး သင်၏ ချစ်လှစွာသော အတ္တဘော ခန္ဓာသည်ပင်လျှင် ယိုယွင်းပျက်စီးရမည် ဖြစ်သည်။
ကျမ အနေဖြင့် ငွေရေးကြေးရေး အလွန်ကြွယ်ဝသူ မဟုတ်သော်ညား ( ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း။ ကိုယ်ပိုင်ကား မှ လွဲ၍) အခြားအခြားသော ရဟန်းတစ်ပါး၏ ပရိက္ခရာရှစ်ပါး နှင့် အခြားလစဉ် ကုန်ကျစရိတ်များ ကို ထောက်ပံ့နိုင်သော စေတနာ အင်အား ရှိပါသည်။ သဘောတူညီပါက ဆက်သွယ်ပါ။ ကိုကျော်သူ ထံမှ တစ်ဆင့် ကျမ လှုဒါန်းပါမည်။ ဘဘ နိူင်ငံရေးနယ်ပယ်တွင် တဖန် ခြေမချပါနှင့်တော့။ အပြစ်မဲ့ကလေးများ ၏ ဇီဝိတ္တ ဒါန အသက်တွေ ကျမ အလှုခံပါရစေ။
“စကြာဝတေးမင်း၏ မယ်တော်ဖြစ်ဖို့ကား လွယ်ကူ၏။ ဘုရားရှင်၏ မယ်တော်၊ ရဟန်းမယ်တော်၊ ရဟန်းအမ ဖြစ်ဖို့ကား အလွန်တရာမှ ခဲယဉ်းလှပါ၏”
“ မိထွေးတော် ဂေါတမီ”
ကျမတို့မြင်လိုပါသည်။ သင်သည် မြတ်သော လူသားဘ၀၏ ပိုင်ရှင် ။ အမှန်မြင်လော့။ ရုန်းထွက်တော့။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 10:15 AM 1 comments
အနိူင်ဖဲ တချပ်၊ အပြီးသတ်မဲ့ ပွဲ
ဒီပဲရင်းမှာ..ဒေါ်စုကို သူကယ်တယ် မကယ်တယ်။
သူနဲ့ဘုရားဘဲသိမယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒေါ်စုကို လုပ်ကြံခိုင်းတဲ့ တရားခံ အစစ်
ဒါက သော့ချက် ဘဲ။
ဆွမ်းကြီးတွေ ၀င် မလောင်းကြပါနဲ့ 
လူမိုက်တွေ လိမ်မာလာ တတ်တာ
လူကြမ်းကြီး သူတော်ကောင်းဖြစ်လာ မလာ..
သင်္ကြန် အခါ..မြန်မာယောက်ျား ဘုန်းကြီးဝတ်တာထုံးစံဘဲ
လုပ်သော တရားခံ..ဘုန်းကြီးတောင် မ၀တ်နိူင်ရှာဖူး။
အနာပေါ် ဒုတ်ကျ ဆတ်ဆတ်ခါ
သိသောသူ၏ အနာဂတ်က မရေရာ
ပြည်သူ့ သက်သေ ရှားပါးသူတစ်ဦး။
ဒို့ သဲလွန်စတွေ အပျောက်ခံသင့်ဖူး။
လူကြီးတွေ ဗျုဟာသိ သူနည်းသူရှိတယ်။
သူတို့ ရဲ့ သံတမာန် ဗျူဟာ လေ့လာသင်ယူပါ။
ငါးမူးတန်းက ကလေးတွေ ငြိမ်ငြိမ်ကလေးတိတ်
ငွေရောင်ပိတ်ကားပေါ် ပွဲဆက်ကြည့်စို့ ။
အရင်စလို ပိတ်ကားကို ပြောင်းဖူးရိုးနဲ့ မပေါက်ကြနဲ့ 
အချိန်တန် ရွှေဘသာ အနိုင်ရရိုး။
ဟောကြည့် နှစ်ခါပြိုင်..ဒို့ ချည်းနိူင်တယ်။
စိတ်ရှည်ကြ မလောကြနဲ့ ။
အနာဂတ်က ဒို့ ဘက်ယိုင်နေပြီ။
အသင်္ခရာစောယွန်းကို သတ်ဖို့သွားခဲ့တဲ့ ငခင်ညို
ထမင်းရှင်မသတ်လိုပေမဲ့ တာဝန်မကြေ မျက်နှာညိုမဲ့သခင်အတွက်
သင့်ကိုသာ တာဝန်ပေး..ဘယ်လို သင်လုပ်မလည်း။
ငခင်ညိုလို ကျောက်စီဒါးလွယ် အမှန်ကို မပြောရဲ
ပြောလဲ မင်းတရားက သတ်မှာမလွဲ။
ခေါင်းပြတ်လဲမပြ ကျောက်စီဓါးလဲ မရ
တေ့လွဲလေးတော့ လွှဲပြလို့ ရတယ်။
ကံကောင်းတာက ဒေါ်စု မသေတာဘဲ။
ငါးလိုချင် ငါးစာချိပ် မှ ရမယ်
သစ်ခုတ်ချင် ပုဆိန်ရိုးတော့ လိုတယ်။
ငုတ်ကောင်ကို အပိုင်ကိုင်မဲ့ အနိူင်ဖဲ တချပ်
အညှာချူတတ်ဖို့ဒို့ လိုတယ်။
သိလိုတဲ့ သတင်း ဘယ်သူ့ ဆီမှာဝယ်။
ယုံကြည်မှု ပေးပါမှ ယုံကြည်မှရ…
နိူင်ဖဲ ကို အလွတ်မခံကြနဲ့ ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:41 PM 1 comments
ငါ့ကို အရင်ကြည့် င့ါအမေကို လာမထိနဲ့ 
enigmaimages.photoshelter.com မှ ဓါတ်ပုံရယူထားပါသည်။
ကျနော့ မွေးအမေ ကျနော် မမှတ်မိတော့ဖူး။
နိူ့ ချို လုစုတာဘဲ မှတ်မိတယ်။
ကျနော် ဘ၀ ပိစိကွေး..
အစာကြွေး ပြုစုခဲ့တဲ့ အမေ..
သူမသာ ကျနော်၏ ကျေးဇူးရှင်ချစ်မေ။
ကျနော့ကို အမေပွေ့ ချီပိုးခိုက်.
ဓါတ်ပုံတွေ ခဏခဏ ရိုက်တယ်
celebrity ပါပီ အဖော်။
အင်းလျှားလေ အနော့ မှာ.
အမေကိုယ်တိုင်ကြွေးမှ စားတဲ့ အစာ
ကျနော် လိမ်မာပါတယ် ဂျာ။
ကျနော့ အကိုကြီး Kim က
ဒါ အကိုကြီးရဲ့ အမှာ
ဒီတခါသာ ရက်တော လာ
ဟွန်း။ အသေကို ကိုက်ပစ်မှာ
ကျနော့ ကို ထားရစ်ခဲ့တာ။
အမေ မတွေ့ ကျနော်ပမ်းတယ်။
ဖျောက်မရ စိတ်က ညစ်။
လက် လာဆော့တဲ့ အဆိုတော်.
ဟပ် လိုက်မိတာ ဒီ ကျနော်။
ကျနော အင်မတန် မျက်စိရှုပ်
ကျနော့ ရဲ့ တာဝန်တော့ မယုတ်လျှော့စေရဖူး။
ကျနော် အမေ့ ဘော်ဒီဂတ်ဖြစ်တယ်။
အမေ့ ကိုဘာဘေးမှ မခ စေရဖူး။
အမေ့ ဆံပင်တပင်သာ ထိ..
ကျနော့ သွားနဲ့ ငြိမယ်။
ကျနော် တိုင်ချီဒို ဗျ။
သား၏ ကိုယ်စား စောင့်ရှောက်နေသော သစ္စာရှိသည့် အမေစု၏ ခွေးကလေး တိုင်ချီဒို အတွက်။ အမကြီးမေးသမျှ မမောမပမ်း ဖြေပေးသော သားသား အဂ္ဂမဟာ ဒီမိုဖက်တီး အားကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါသည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:07 PM0comments
ဟားဟား ပြောလိုက်ရရင် မင်း ဖျားသွားမယ်။
စင်္ကာပူက လီကွမ်းယု လည်တာ
ကျုပ် အိပ်ငိုက် နေတာဘဲရှိတယ်။
ကဒါဖီ မူဘာရက် ပါးတာ..
ကျုပ်ခြေအောက်က ဖုန်မှုန့် သာသာ။
အူတူတူ နုံအအ ကျုပ်နဲ့ ကျ
ဦးနေ၀င်းတောင် မသေခင် ငိုသွားတာကြည့်။
ဌဲ ဌဲ…ကျုပ်ပါ ဗျ တာတေ။
သမီးလည်း လင်ရ..စိန်ပွင့်လည်း ရ
ကမ္ဘာပေါ် ကျုပ်သမီးချော မျက်နှာပြ။
၀၀ ကလေးဗျ စိန်ဂွက်ထော်
သမတလူကြမ်းဇူဇကာအဖွဲ့လက်သပ်လူမိုက် ကျုပ်မွေးခဲ့။
ကျုပ်ရဲ့ ရွှေ့ ကွက် ဘယ်လောက်လှ
ပါမစ်ဖဲ့ချ လက်ဝေခံ။ ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများ ဝေခွဲရန်
ကျုပ်က ပုံမှန် ထိုင်ရုံဘဲ။
လာဘ် လာဘငွေ လျှောကနဲ
ကျုပ်တို့အလီဘာဘာ အဖွဲ့သားပေါ့။
တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင် လုပ်ဖို့ လွယ်။
ဖျက်ဆီးဖို့ ကျ ကျုပ်လူလည်
ကျုပ် ၀မ်းခေါင်းကျယ် အပီစား
မောင်ရင်ဂိန် မင်းသာ ရှင်ဘုရင်လုပ်လှဲ့ တော့။
လွတ်တော်ထိုင်ခုံ NLD ကို နည်းနည်းပေးစား
မဲပြားတွေ ဖယောင်းသာ သုတ်ထားလိုက်။
ကောင်မလေးပြ ဆန်ရှင်တွေ ဖြုတ်ခိုင်းလိုက်။
ကဒါဖီ သေနတ်မှန် အလောင်းကျည် ပလပွ
အာဏာရှင်များ အရှုံး ဇာတ်သိမ်းမလှ
ဗုဒ္ဓ ဘာသာပီပီ ပြည့်ဝတဲ့ ခန္တီပါရမီ
ကြာပြီဆိုရင် ကျုပ်ကို မေ့မှာပေါ့။
စိန်ထုပ်သာပိုက် ၍သာ ပြေး…
ကျုပ်ဟဲ့ ငတုံးလား ဝေးသေးတယ်။
ကျောက်ဆည် က ငလည်။
လီကွမ်ယူရေ ပျင်းတောင် ပျင်းသေးတယ်။
ဗိုလ်အောင်ဒင်ထဲကလို ဆိုရရင်ဖြင့် လူဆိုးတွေက ကိုယ်ပျောက်နေတာလား။ ပုလိပ်တွေက အိပ်ပျော်နေတာလား...စဉ်းစားနေစဉ် ဒိုင်ကတော့ စားပြီးပြေးပြီ။
ကဲ ဘာ ဆက်လုပ်ကြမလဲ
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:17 PM0comments
တစ်နေ့ အတွက် တစ်လံ
ဖြေးဖြေးနဲ့မှန်မှန်
မလျှော့သော ဇွဲဝီရိယ ရည်သန်။
တစ်နေ့ မှာ ဒို့ သောက်ကြရမှာပေါ့။
ဒီ ဓါတ်ပြားဟောင်းလေးဘဲ ထပ်ဖွင့်ပါရစေ။
ကျမတို့ လက်ထက် ရတနာမြေ
မြစိမ်းရောင် နဲ့ လယ်ယာ
နဒီပြာ မြစ်သား အမိဧရာ
ရှဉ့်လည်း လျှောက်သာ ပျားလည်းစွဲပေါ့။
အားလုံးဟာ ဗမာတွေ မို့ 
အမျိုးကို ခင် အားလုံးပြင်ကြစို့။
နိုင်ငံသစ်သို့ဒို့သွားကြရအောင်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 11:59 AM0comments
သုညထက်စာ.တစ် က သာတယ်။
မိုးရေ တစ်စက်စီ စု..
ကြော့မော့စွာ ပန်းတိုင်ဆီ အပြီးသတ်။
ပြည်သူ့ မေတ္တာ ဘယ်မှာဆီ
NLD ဟေ့ NLD..
အာဏာရှင်ခေတ်ဆိုတာ ခုများမှာ သံပတ်ရပ်ချိန်ပေါ့။
အရှေ့အရပ်မှာ ပေါ်ခဲ့တာ လင်းလက်ရောင်နီ။
ဘိုဆန်ချင်လည်း အချိန်တန် မြန်မာပြန်သလိုိပေါ့
အဆိုးမြင်ရေစီးတွေ ဒို့ ဆန်တက်ကြဖို့ ။
အကောင်းမြင်ဝါဒ ဒီနေ့ က စကြစို့ ။
စွန့်ပစ် အိမ်အို တဖန်ပြန် အိမ်ပျိုဖြစ်ရအောင်..
နှမ်းတစ်တင်း မှာ ဆီရတယ်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 11:22 AM0comments